Wasaaradda Ciyaaraha Somaliland oo maxkamadeyneysa dadkii ku matalay tartankii K.Cagta ee Dunida aan la aqoonsaneyn! | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Wasaaradda Ciyaaraha Somaliland oo maxkamadeyneysa dadkii ku matalay tartankii K.Cagta ee Dunida aan la aqoonsaneyn!
Wasaaradda Ciyaaraha Somaliland oo maxkamadeyneysa dadkii ku matalay tartankii K.Cagta ee Dunida aan la aqoonsaneyn!
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 13-06-16 8:47 PM Wasaaradda Ciyaaraha Dhaqanka Iyo Dalxiiska Somaliland, ayaa daboolka ka qaaday inay sharciga la tiigsanayso cid kasta oo ku lug lahayd in koox ku ciyaaraysa magaca Somaliland ay ka qayb gasho tartan ciyaareedkii koobka aduunka wadamada aan la aqoonsanayn ee sanadkan ka dhacay Gobolka Abkhazia ee Bariga qaarada Yurub.
Agaasimaha Guud ee Wasaarada Ciyaaraha dhaqanka iyo Dalxiiska, Maxamed Xuseen Dhabeeye, ayaa sheegay inay la xisaabtami doonaan oo sharciga hor keeni doonaan kooxdii sheegatay magaca xulka Somaliland ee tartankaas ka qayb gashay, kuwaas oo uu ku sifeeyey kuwo huwanaa magac been abuur ah.
“Siyaasada ciyaaraha dalka, Wasaaradan ayaa masuul ka ah, sharciyan iyo qaanuuniyanba iyadaa meteli karta.” ayuu Agaasimaha Maxamed Xuseen ku bilaabay waraysi gaar ah oo uu siiyey Telefishanka Horn Cable.
“Dalkuna wuxuu leeyahay hayado ciyaareed oo dhamaystiran, oo wixii dal uun laga rabay ah.”
Dadka halkaas tagay uma aqoonsanin inay Somaliland qarankeeda matelayeen, waayo metelaada qaranku waxay u baahan tahay wax aad iyo aad u faro badan.”
“Arinta dambiga ah ee aanaan ka hadhayn, ee aanu rabno inaanu dabagalaa waxaa weeye, nimankaasi waxay sameeyeen been abuur, oo waxay yidhaahdeen, waxaanu nahay, Somaliland Football Association.”
“Somaliland Football Associatin-a halkan ayay ka jiraan, oo xafiisbay leeyihiin, sharci bay leeyihiin, wey is doortaan, xubno ayaa jira, ka diwaan gashan naadigaas, oo Somaliland gudeheeda ka jira, qadiyadaasi waxay dhaawacday dedaalkii sidaas ahaa. Taas ayaa ah ta aanu anagu diidanay ee aanaan ka hadhaynin.”ayuu yriri Agaasime Maxamed.